"Indlu Esemaphandleni Entle" eAvalon Beach - I-Airbnb
"Indlu Esemaphandleni Entle" eAvalon Beach
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguRoss & Margie
URoss & Margie yi-Superhost
Nokuba ufuna indawo yokuphumla engaselunxwemeni kunye/okanye indawo yomtshato ekufutshane, indlwana yethu ixhotyiswe ngabo bonke ubunewunewu bezidalwa zanamhlanje zendawo yokuhlala eyedwa kunye neyabucala. Kukuhambo lwemizuzu emihlanu kuphela ukuya kwindawo ehlukeneyo ye-Avalon yokutya kunye neevenkile, okanye uvuyo lokusefa eWhale okanye ePalm Beach. Kungenjalo, ukukhwela isikhephe ukujikeleza iPittwater, okanye ukunyuka ukuya ePalm Beach Lighthouse zonke zikufutshane neAlbert Cottage, zishiya amava angalibalekiyo.
I-Albert Cottage yahlukile kuba yindlu encinci-emiyo simahla eyahluke ngokupheleleyo kwindawo yokuhlala ephambili kunye ne-driveway yayo, ke ngoko ibonelela ngenqanaba lobumfihlo bokwenyani.
Ibekwe kumgama nje omfutshane (malunga ne-15/25 imiz) kuzo zombini iWhale Beach kunye neAvalon Beach kunye nelali, indlwana yenzelwe ukuhlalisa abantu aba-2-4 ngokukhululeka (ukuba kunokwenzeka aba-5).
Kwiindwendwe ezinomntwana kwaye zibonelele ngebhedi yazo yokuhamba, akukho ntlawulo yongezelelweyo. Kumntwana ohleli ebhedini, intlawulo iyafana neyomntu omdala.
Kwakhona, iPalm Beach entle (indawo yothotho lweTV "Ekhaya & Ukude") ikumgama nje wemizuzu eli-10 ngemoto okanye ngebhasi.
Kukho inani leendawo zokutyela ezilungileyo kunye neekhefi kumgama wokuhamba kunye nendlela enkulu yebhasi eya esixekweni.
* Amagumbi okulala ama-2 aneengubo ezakhiweyo.
*Ibhedi eyiQueen kwi-Master b/room kunye neye-2nd enebhedi enye ephindwe kabini kunye nenye.
*Igesi/indawo yokupheka yombane/i-oveni, imicrowave, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi.
*Igumbi lokuhlambela langoku/indlu yangasese eneshawa (akukho bhafu).
* Umosi wenwele.
* Umdlali wedvd
4.93 · Izimvo eziyi-279
Siyayithanda indawo esihlala kuyo; kukuhamba umgama ukuya kumalwandle amabini amangalisayo; sineendawo zokutyela ezininzi ezilungileyo kwimizuzu embalwa nje uhambe kwaye isitrato esithe cwaka kwindawo enkulu.
Ilali yaseAvalon yindawo yokuthenga edlamkileyo nenomdla enevenkile enkulu, icinema, iibhanki, iposi, iindawo zokutyela kunye neendawo zokutyela.
Kwabo bathanda umjikelo wegalufa, iAvalon inekhosi entle kakhulu enemingxuma eyi-9 elapha elalini kwaye iPalm Beach ibonelela ngekhosi enemingxuma esi-9 enombono wolwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Ross & Margie
Iindwendwe zethu ziya kushiywa ukuba zizonwabele iholide yazo ngoxolo, kodwa sihlala sonwabile ukuba sisebenzisana noluntu.
Kwiimeko ezininzi siya kubakho ngexesha lokuhlala kweendwendwe.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-33617
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$352
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Avalon